अबिरल बर्षाका कारण पहिरोले ३ जनाकाे ज्यान लियो! – PathivaraOnline
Home > समाचार > अबिरल बर्षाका कारण पहिरोले ३ जनाकाे ज्यान लियो!
२७ असार, काठमाडौं । अविरल वर्षाकोले पहिराे जाँदा काभ्रे र रामेछापमा ३ जनाको मृत्यु भएकाे छ । मृत्यु हुनेहरुको सनाखत भएको छैन । काभ्रेको नाला भन्ने ठाउँमा पहिरोले पुरीदा २ जनाको र रामेछापमा १ जनाको मृत्यु भएको आईजी सचिवालयका एसपी रमेश थापाले बताएका छन् । यस्तै काभ्रेमा पहिरोले किच्दा ३ जना घाइते भएको एसपी थापाले बताए । घाइतेहरुको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोसः नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा पहिरो झरेका कारण यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको छ । सडकमा पहिरो झरेपछि अहिले सो खण्डमा मुस्किलले एकतर्फी मात्रै गाडी चलिरहेका छन् । बिहीबार राति भएको वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि सडक एकतर्फी मात्रै सञ्चालनमा आएको हो । यो सडक खण्डको सत्र किलोमा बिहीबार राति १० बजेतिर पहिरो खसेकाले एकतर्फी रुपमा मात्रै गाडी चलेको र ठूलो पानी परिरहेकाले पहिरो पन्छाउन समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
एकतर्फी रुपमा आलोपालो गरी मात्रै गाडी चलेकाले लामो जाम भएको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।
यो सडक खण्ड निर्माणका क्रममा अघिल्लो वर्ष पनि पहिरोका कारण यात्रुले सास्ती बेहोर्नु परेको थियो । वर्षा लागेसँगै यस खण्डमा वर्षेनी पहिरोको समस्या बढ्ने गरेको छ ।